သေသူများကို ရယ်မောကြသောတိုင်းပြည် – Pann Satt Lann Books
တကယ်တမ်းသူတို့အချင်းချင်း တိုက်ခိုက်ကြသည်ဆိုသော်လည်း သူတို့၏ နောက်ကွယ်က အားပေးနေသည့် အုပ်စုများကတော့ ကိုယ့်ဖက်နာလျှင် ဒေါသဖြစ်ကြ၊ ပေါက်ကွဲကြ၊ သူ့ဘက်နာလျှင် ဝမ်းသာပြကြ၊ ရွှင်မြူးပြကြနှင့် သံသရာလည်နေကြသည်။ သို့သော် သူတို့ ဝမ်းသာပြသည့် ကိစ္စမှာ ဘောလုံးပွဲကိစ္စမျိုး၊ ကြက်တောင်ရိုက်ပြိုင်ပွဲလိုကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘဲ လူအချင်းချင်းသတ်ဖြတ်သည့် ကိစ္စရပ်များ…. (စာအုပ်ကျောဖုံး ကောက်နှုတ်ချက်)
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့် ရခိုင်အရေး ဝေဖန်လေ့လာရေးသားသူ ဂျာနယ်လစ်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဆရာကျော်လင်းရောင်စုံ၏ နိုင်ငံရေးဝေဖန်သုံးသပ်ချက်ဆောင်းပါးများ စုစည်းထားပါသည်။ Myanmar Now, Asia Times, ယနေ့ခေတ် (သမိုင်းနှင့်နိုင်ငံရေးမဂ္ဂဇင်း)၊ DMG Website၊ ဧရာ၀တီမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များတွင် ရေးသားခဲ့သော ဆောင်းပါးများဖြစ်ပြီး ခေတ်ကိုဖြတ်သန်းနေသူ မြန်မာဂျာနယ်လစ်တစ်ဦး၏ အမြင်၊ အတွေး၊ သုံးသပ်ချက်များစွာကို ယခုစာအုပ်တွင် ဖတ်ရှုရမှာဖြစ်ပြီး စာဖတ်သူ၏ ဦးနှောက်ကို နှိုးဆွလှုပ်ခတ်မည့် စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်ပါသည်။
5.3 × 0.6 × 8 inches
ပန်းဆက်လမ်းစာပေ၊၊ ၂၀၂၀ ဩဂုတ်လ၊ (ပ-ကြိမ်)
သေသူများကို ရယ်မောကြသောတိုင်းပြည် အား ဝေဖန်သုံးသပ်မှု2ရှိပါသည်။
Min Min – September 9, 2020
ဒီစာအုပ်ကတော့ ဆရာကျော်လင်း (ရောင်စုံ) ရဲ့ဆောင်းပါး ပုဒ်ရေ ၄၀ ကို တစ်ပေါင်းတည်းထုတ်ထားတဲ့ စာအုပ်ပါ။ အကြောင်းအရာတွေကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ စစ်ပွဲအကြောင်းတွေပါ။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်လာတာ နှစ်ပေါင်း ၇၀ ကျော်လာသလို စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ စာအုပ်တွေလည်း ၇၀၀ အထက်တောင် ရှိမယ်နဲ့တူပါတယ်။ တချို့ဆိုရင် စေတနာအရင်းခံနဲ့ ရေးကြတယ်။ တချို့ကျတော့လည်း သွယ်ဝှိုက်တဲ့နည်းနဲ့ ဝေဖန်ကြတယ်။ တချို့ကျပြန်တော့လည်း စာဖတ်သူတွေကို ဂျင်းထည့်ကြတယ်။ ဆရာကျော်လင်း (ရောင်စုံ) ကတော့ သူမြင်တာကို မြင်တဲ့အတိုင်း ပွင့်ပွင့်လင့်လင့်ရေးထားတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း အားနာမနေသလို ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း ကြောက်မနေဘူး (ကြောက်မနေလို့လည်း ကျွန်တော်သိသလောက် နှစ်ခါတောင် လုပ်ကြံခံရပြီးပြီ)။
ဘယ်သူတွေ ဖတ်သင့်လဲလို့မေးရင် ယေဘုယအားဖြင့် လူတိုင်းဖတ်သင့်တယ်လို့ပဲ ပြောချင်တယ်။ အသေးစိတ်ပြောရရင်တော့ ရခိုင်မှာဖြစ်နေတဲ့ စစ်ပွဲအကြောင်းနဲ့ မြန်မာ့ပြည်တွင်းစစ်ဘာကြောင့် ရှည်ကြာနေရလဲ သိလိုသူတိုင်း ဖတ်သင့်ပါတယ်။ ရခိုင်စစ်ပွဲအကြောင်းဟာ အွင်လိုင်းပေါ်မှာ ဟော့ဖြစ်သလောက် သတင်းစာတွေထဲ ဖော်ပြမှုအားနည်းတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပဲ ဆိုပါတော့။ တချို့ဆိုရင်လည်း ရခိုင်မြည်ပေါ်တစ်ခါမှ ခြေမချဖူးပဲ ယမ်းသမ်းရေးနေကြတာတွေကို တွေ့ရတယ်။ ဆရာကျော်လင်း (ရောင်စုံ) ကတော့ သူကိုယ်တိုင်လည်း သတင်းသမားတစ်ယောက်ဖြစ်သလို စစ်မြေပြင်ထိ ကွင်းဆင်းလေ့လာနေတဲ့ သုတေသီတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်ဖတ်သင့်လဲကို တိုတိုနဲ့လိုရင်း ဖြေရရင်တော့ ပုံစံခွက်ထဲက ဖောက်ထွက်ပြီး တွေးပြထားလို့ပါ။ လူအများစုကတော့ စစ်ပွဲဆိုတာ နှစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ စီးပွားရေး၊ သူတို့ကိုယ်ကျိုးအတွက် တိုက်ခိုက်နေတာ လို့ တွေးကြပါတယ်။ ဆရာကျော်လင်း (ရောင်စုံ) ကတော့ ဖိနှိပ်သူရှိနေလို့ တော်လှန်သူရှိနေတာလို့ပဲ တွေးပြပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ သူပြောတာကိုလက်ခံတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နှစ်ပေါင်း ၇၀ ခန့် သက်တမ်းရင့်တဲ့ တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းတွေ အခုထက်ထိ ပြည်သူ့ထောက်ခံမှု နောက်လိုက်တွေရဲ့ ထောက်ခံမှု ရနေကြဆဲ ဖြစ်လို့ပါ။
“ဒီလူတွေ ဝါဒမှိုင်းမိနေကြလို့ပါ” လို့ပြောရင်လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သေချာတာတစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ ကိုယ်ယုံကြည်ရာ ဝါဒရဲ့ မှိုင်းမိခြင်းကို ခံနေကြရတဲ့ လူတွေကြီးပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက တခြားဘာသာဝင်တွေကို ဒိတ္ထိလို့ပြောကြသလို တခြားဘာသာဝင်တွေကလည်း ကျွန်တော်တို့ကို ဒိတ္ထိလို့ပြောကြသလိုမျိုးပေါ့။ နောက်ထပ် သူတွေးပြတာလေးတစ်ခုကတော့ တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ လူတွေကို နောက်က အားပေးနေတဲ့ အုပ်စုတွေပါ။ ဒီအုပ်စုတွေဟာ တကယ်ပဲ သေသူတွေကို ရယ်မောနေကြတဲ့ အသဲနှစ်လုံးမရှိတဲ့ သူတွေလား။ ဘာကြောင့်များ ရယ်မောနေကြတာလဲ?
Mercury – September 9, 2020
ပြည်တွင်းစစ်အကြောင်းနဲ့ လူ့သဘာဝအကြောင်းတွေကို လတ်ဆတ်သော စကားလုံးဆန်းသစ်သောအတွေးများနှင့် တင်ပြထားတာဖြစ်လို့ လေ့လာလိုသူတိုင်း ဖတ်သင့်တဲ့စာအုပ်လို့ ယူဆပါတယ်။ အသိစိတ်နဲ့တည်ဆောက်ကြတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ မုန်းတီးခြင်း၊ မနာလိုခြင်း၊ အနိုင်ယူလိုခြင်းများကင်းဝေးပြီး အခြေခံအကျဆုံးသောကူညီမှု၊ ရိုင်းပင်းမှုတွေပေါ်ပေါက်စေဖို့ သဘောတရားများ မိမိတို့ရဲ့ဇာတိမြေကို မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားစိတ်များဖြင့် “ရောင်စုံပန်းချီကားချပ်ကြီး” ပမာသေသပ်ပြောင်မြောက်စွာ ရေးဖွဲ့ထားပုံကို လည်းချီးကျူးမိပါတယ်။
အမှန်တရားကိုလိုချင်ရင် အမုန်းခံနိုင်တဲ့နှလုံးသားကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့တော့လိုပါတယ်။ အချစ်သာခံမယ် ရန်မပွားချင်ဘူးဆိုရင် လူ့သမိုင်းမှာ၊ လူတွေထဲမှာ မျက်နှာထောက်ရမည့်အရာတွေရှိနေသမျှ အမှန်တရားဟာ မပီပြင်နိုင်ပါ” ဆောင်းပါးစာမျက်နှာ(၁၀)မှ
“ငါနှင့်မတူငါ့ရန်သူ”၊ “လူတစ်ဉီးလိမ်လည်နေသည်ကို မကျေမနပ်ဖြစ်နေသောသူသည် ယခုလိမ်နေသည့်သူထက် ပိုလိမ်လည်ရန်ရှိ၍ဖြစ်သည်” ( အင်္ဂလိပ်အဆိုအမိန့်တစ်ခု)
“ရခိုင်ပြည်က လူသတ်ကွင်းနည်းအောင် ဘယ်သူတွေလုပ်ဆောင်နိုင်မလဲ။” ဆောင်းပါးစာမျက်နှာ( ၁၇)မှ
“တစ်ချိန်က မြောက်ဉီးထီးနန်းကို အလည်လာခဲ့သော ပေါ်တူဂီဘုန်းတော်ကြီး မန်နရိတ်က ထိုခေတ် သူမြင်တွေ့ခဲ့သောမြောက်ဉီးကို အာရှတိုက်ရဲ့ ဘင်းနစ်မြို့ဟု တင်စားခဲ့” စစ်ပွဲအရသာကို မြည်းစမ်းလာရတော့မည့် ရခိုင်ပြည်နှင့် ရက္ခိတလမ်းစဉ်ဆောင်းပါးစာမျက်နှာ( ၆၃ )မှ
“တချို့တွေကအချစ်ရှိရင်ပြည့်စုံတယ်၊ ငွေရှိရင်ပြည့်စုံတယ်လို့ထင်တာပါ။ တကယ်တမ်းကျတော့ လိုအပ်ချက်တွေများစွာ” အသစ်တွေကိုမက်မောကြမယ် ဆောင်းပါးစာမျက်နှာ(၁၈၉ )မှ
တခါတလေ ကိုယ့်စိတ်မှာရှိတာနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ချက်တွေလုပ်မိတဲ့အခါ မိမိဗဟိုပြုပြီးတော့ လုပ်လိုက်မိရင်လည်း မှားတတ်ပါတယ်” “နေမင်းကြီးအောက်မှာဖြစ်ပျက်နေသမျှ ဘာမှမထူးဆန်းဘူး”
နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုအတွေးတန်ဖိုး ဆောင်းပါးစာမျက်နှာ (၂၀၁ )မှ
“နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြားထဲတွင် အဖြေရှာနေကြခြင်း၊ အပြစ်တင်နေကြခြင်းသည် သဘာဝကျကျရှိနေသော်လည်း ဓားစာခံပြည်သူများအနေဖြင့် စစ်ဘေးရှောင်သည့်ဒုက္ခထက် လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းဖက်ကို ဉီးမတည်စေဖို့ကိုသာ နှစ်ဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်များ သတိပြုသင့်ပါကြောင်း” လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းဆီသို့ဆွဲခေါ်နေမှုများကို သတိထားဖို့လိုအပ်နေပြီလား ဆောင်းပါးစာမျက်နှာ (၂၄၈)မှ
အထက်ပါကဲ့သို့ အခြားဆောင်းပါးများသည်လည်း ဟင်းလေးအိုးကြီးသဖွယ် အင်မတန်ဖတ်ကောင်းပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ဖတ်ပြီး ရရှိလိုက်တာကတော့ လူအချင်းချင်းလက်တွဲခေါ်ဆောင်ဖို့၊ အပြန်အလှန်အကျိုးပြုကြဖို့၊ မျှတတဲ့အတွေးနဲ့စာနာနားလည်တတ်ဖို့လိုပါကြောင်း။
လက်နက်များအလုပ်ဖြစ်နေသည် (30 % Off)
3000 (ကျပ်) 2100 (ကျပ်)